गर्भमा छोरा छ कि छोरी ? यसरी पत्ता लगाउनुहोस् !
एजेन्सी । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया तथा ड्युक युनिभर्सिटीले गरेको अध्ययनले तपाईको गर्भमा रहेका शिशु छोरा हो कि छोरी भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिने देखाएको छ । यसको लागि भिडियो एक्सरे वा डाक्टरको सहयोग आवश्यक पर्दैन। जो चाहि सुँघेर नै थाहा पाउन सकिन्छ ।
उक्त अनुसन्धानका अनुसार यदि गर्भवती महिलाको पेटमा छोरा छ भने उनको शरीरबाट एउटा भिन्न प्रकारको गन्ध आउने गर्दछ भने छोरी भएको अवस्थामा अर्कै प्रकारको गन्ध आउँछ । यो गन्धको आधारमा गर्भवती महिलाले छोरालाइ जन्म दिँदैछिन् वा छोरी भन्ने थाहा हुन्छ ।
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया तथा ड्युक युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले जेरेमी क्राउफोर्ड तथा क्रिस्टाइन डेराले यो कुराको परीक्षण लीमर प्रजातिको बाँदरमा गरेका छन् ।
यी दुबै वैज्ञानिकहरुले यो शोध रोयल सोसाइटी जर्नल बायोलोजी लेटर्समा छापेका छन् । डेली मेल स्रोत मा उल्लेख गरिएको छ ।
मानिसहरुमा पनि यस्तै सम्भव
लीमर बाँदरमाथि गरिएको यो सफल परिक्षणका अनुसन्धानकर्ताद्वयले यस्तै मानिसहरुमा पनि सम्भव हुने बताएका छन् ।
यद्यपी गर्भवती महिलाको शरिरबाट निस्किएको गन्धको आधारमा छोरारछोरी पहिचान गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धान गरिएको छैन ।